नागरिकको मुद्दामा न्याय हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । - डा. सुन्दर बोहरा
आईत, कार्तिक ९, २०७७
अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकृकीत विकास समितिको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि छनौट समितिले तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ । तीन वर्षे कार्यकालका लागि करिब २७ जना व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । त्यस समय बुझाएको आवश्यक कागजात तथा छनौट समितिले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा विभिन्न प्रक्रिया पार गर्दै आवेदक त्रय उद्धव प्रसाद तिमल्सेना, जानुका पौडेल र डा. सुन्दर बोहरालाई छनौट गरि मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा आवेदन दिनुको कारण, कार्यदिशा, रणनीति तथा योजनाका विषयमा ईकोसमाचार डटकमको टोलीले डा. बोहरासगँ गरिएको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौ ।
समितिको अध्यक्षका निम्ति सिफरिस हुदाँ कस्तो अनुभुती भईरहेको छ ?
धन्यवाद, यो सामान्य छनौटको प्रक्रियामा छौँ । आवेदन परेका सबै मध्येमा हाम्रो क्षमता वा विशेषता अलि पृथक रहेको हुनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकृकीत विकास समितिको अध्यक्ष पदको अन्तिम चरणसम्म आईपुग्दा खुसी लागेको छ ।
आफ्नो क्षमता के मा देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्ति आफैमा पूर्ण हुदैन । मैलै जुन सोच र विचारका साथ अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिएको हुँ र तत्काल अहिले प्राथमिकतामा रहेका काम गर्ने धेरै क्षमता तथा गुण मसगँ मिल्छ जस्तो लाग्दछ । बाग्मती नदी किनारमा जन्मेर हुर्केको र त्यहाँको स्थानीय भएको हिसावले पनि मलाई धेरै कुराको अनुभव रहेको छ । नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारी निकाय एशियाली विकास बैकंंको संयुक्त प्रयासमा नदी किनार, बाग्मती नदीको मुहान भईरहेका कामको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको छु । मेरो सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यवहार तथा शैक्षिक आधारलेपनि उपयुक्त पात्र हुँ भन्नेमा विश्वास दिलाएको छ ।
छनौट समितिसगँ प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ?
हामीलाई रणनीतिक योजना सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो । मैले विशेषगरि ५ हजार शब्दमा आफ्नो बिजनेस प्लान, योजना, बाग्मती समितिले सम्बोधन गर्नुपर्ने तत्कालिन तथा दीर्घकालिन योजनाका विषयमा जाानकारी दिएको छु । मैले सफा, स्वच्छ बाग्मती नदीको परिकल्पना सहित, सही रुपमा फोहोर व्यवस्थापन, बाग्मती प्रहरीको गठन गरेर नियमित रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको निगरानी गर्ने, निरन्तर रुपमा सफाइ गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नदी किनारमा फलफूल तथा अन्य विरुवा रोपेर हरियाली निर्माण गर्ने, धार्मिक पदयात्रा प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयलाई महत्व दिएको छु ।
यहाँले व्यक्त गरेका कुरा साकार हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा स्पष्ट रुपमा सपना वा भिजन देख्नुनै कुने काममा सफलतामा पुग्नु हो । मेरो शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारले म ती विषय पूरा गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ । सामाजिक क्षत्र तथा नागरिकको सभ्यतासगँ जोडिएको विषयमा स-साना समस्या देखापर्नु स्वाभाविक हो । तर बाग्मती नदीलाई प्राकृतिक स्वरुपमै फर्काउने स्पष्ट आधार तथा ठोस कार्यक्रम मसगँ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यहाँ बाग्मती रोकिएको सौन्दर्यकरणको तथा पूर्वाधार निर्माणको कारक बनेको जग्गाको मुआव्जा विवाद र अतिक्रमित वस्तीको विषयमा त पक्कै जानकार हुनुहुन्छ होला ?
मैले अघिनै यहाँलाई निवेदन गरेको थिए । मेरो बाल्यकाल नदी किनारकै क्षेत्रमा हुर्किएको हो । बाग्मती नदी किनारमा भईरहेको पूर्वाधार निर्माण वा सौन्दर्यकरणको विषयमा जानकार छु । यी दुवै समस्या समाधानका लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत गृहकार्य पहिलेदेखिनै गर्दै आएको पनि छु । यी समस्यासगँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरकार राख्ने स्थानीय दाजु भाई तथा दिदि बहिनी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासगँ पहिलेपनि संवाद तथा छलफल गरेको छु र समाधानका लागि स्पक्ष्ट आधार समेत देखेको छु ।
मेरो विचारमा कुनैपनि समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न पात्रले भन्दापनि प्रणालीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सामुहिक प्रयासमा खोजिने र गरिने पहलको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको छु ।
समितिको अध्यक्ष फेरिदा बाग्मती नदी किनार तथा पानीको गुणस्तरमा के परिवर्तन हुन सक्छ ?
हामीले बुझनुपर्ने विषय के छ भने अध्यक्ष पात्र फेरिने भन्दापनि त्यो पात्रसगँ बाग्मतीका विषयमा भएको ठोस कार्यक्रम तथा भिजन कस्तो छ भन्ने हो । स्वभाविक रुपमा हामीजस्ता धेरै सरोकारवाला तथा अभियन्ताले पछिल्लो एक दशकमा बाग्मती नदीको स्वरुप र फोहोर व्यवस्थापनमा जुन काम गर्यौ त्यो प्रशंसायोग्य रहेको छ । म स्थानीयबासी, सफाइ अभियन्ता तथा शिक्षित नागरिकको कोणबाट बाग्मती नदीलाई नियालिरहेको छु । म विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु कि एक पटक सरकारले अवसर दिएमा नतिजामुखी योजना निर्माण गर्दै शहरी सभ्यता झल्कने गरि नदीमा फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनको काम गर्न सक्छु ।
मैले बाग्मती समिति भएको मानव स्रोतको क्षमता तथा दक्षता देख्ने मौका पाएको छु । उहाँहरुलाई स्पष्ट रुपको नेतृत्व आवश्यक रहेको र त्यो म मा छ भन्ने विश्वास गर्दछु । यो समय उपलब्धीको विषयमा शब्द कम, समय ज्यादा खर्चेर नतिजा देखाउने बेला भएकाले यसका निम्ति अवसर कुरिरहेको छु ।
नागरिकलाई केहि आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?
नागरिकको सक्रियतामा भएको सकारात्मक काम मध्ये एक, बाग्मती सफाइ महा अभियान हो । हामी क्षमता, सोच र समयका कारण फरक फरक भूमिकामा रहन सक्छौ । सबैको सहकार्य सद्भाव र सप्रेम सहितको अभियानले बाग्मती नदीलाई प्राकृतिक स्वरुपमा फर्काउन सक्छौं । रचनात्कम आलोचनासहित बाग्मती तथा अन्य सहायक नदीको संरक्षणमा स्रोत, शक्ति तथा उर्जा खर्चन आग्रह गर्दछु । हामी पूस्तालाई वातावरण तथा मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वच्छ बाग्मती हस्तातरण गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छौं । अहिलेसम्म यहाँहरुले गरेको काम शब्दमा बर्णन गर्न सकिन्न् ।
बाग्मती नदीमा झुक्केर फालिने फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनका निम्ति विशेष पहल गरौं । साझा अभियानमा सामुहिक सोच शक्ति रहने भएकाले त्यसमा लाग्न प्रेरित गर्दछु । साथै शुभ विजया दशमीको उपलक्ष्यमा स्वच्छ नदी बनोस् भन्ने मनोकामना पूरा गर्ने शक्ति दुर्गा माताले प्रदान गरुन् भन्न चाहन्छु ।